MacBookPro muFreezer | Martech Zone
Wednesday, May 2, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Wazvinzwa zvakanaka! Ndanga ndichive nematambudziko neMacBookPro yangu nguva pfupi yadarika kwandisingakwanise kuitangazve. Icho chinongogara ipapo uye hapana chainoita. Zvinoshungurudza. Ndakatanga kufungidzira kuti inogona kunge iri nyaya ye thermostat saka ndakaita bvunzo - ndakaisungirira mufiriji. Maminetsi gumi gare gare ndakaiburitsa uye ikabhorera kumusoro kumusoro ... hapana dambudziko.
Ndakaiyedza nenzira iyi kashoma uye ndakasimbisa kuti ndiyo nyaya. Pane mumwe munhu ane dambudziko iri here? Basa rangu rakaraira nyowani uye ini ndakaedza kuendesa mafaera angu nezuro husiku (ndosaka iwe usina kuona posvo) asi handina kukwanisa kuzviita kuti zvishande. Taura nezve zvinoshungurudza!
Saka nhasi ndiri kuzotora ruoko kubva kune yangu super-duper-mac-mushandisi, Bill, kuti tione kana tichigona kuendesa mafaira pamusoro uye kuendesa iyi inorwara MacBookPro kwachiremba.
Kublogi Evhangeri kubva kuna Guy Kawasaki
May 2, 2007 pa 9: 14 AM
Ndine urombo kunzwa kuti Doug, ini ndichangobva kuisa chirongwa chekudzora fan pane yangu Macbook nekuti ndaisada kuti yaipisa sei, ndakaiisa saka haimborega fan ichidonha pazasi pe3500rpm. Yaimbove nehusimbe pa1800rpm asi rega iyo CPU isimuke kusvika ingangoita 65C isati yatanga kukwiridzira fan, izvo zvaiita senge zvakanyanya kukwirira, asi software yacho inobvumidza kudarika. Ini ndinofunga yainzi smcFanControl. Asi ini handifunge kuti ichagadzirisa dambudziko rako 🙂
Iwe unogona zvakare kungogara mufiriji pamwe nelaptop? kukurumidza kuwana doro?
May 2, 2007 pa 10: 38 AM
Ini ndakapa iyo pfuti, zvakare (ini ndaishandisa iyo SMC fan fan) asi haina kubatsira. Iyo MacBookPro yakanga isiri kunyanyisa kupisa… inongofunga kuti kana iwe ukatanga. Chero bedzi ndisina kumbotangazve, zvakanaka. 🙂
May 2, 2007 pa 12: 04 PM
Doug, ndakafunga zano rese re Mac Mac maWindows based muchina wanga usingade kuti utangezve nguva dzese?
Wazviona here kuti handina kuti Mac mavhesi PC? Sei? Ose ari Makomputa Evanhu 🙂
May 2, 2007 pa 12: 18 PM
… Ndinofungidzira iwe unoziva kuti iwe unogona kutanga yako Mac mune firewire modhi nekuchengeta pasi iyo T kiyi panguva yebhoti. Kutamisirwa zviri nyore kwemafaira…
May 2, 2007 pa 12: 48 PM
Ndakapedza husiku hwese ndichiyedza iyo foo! Zvinomira pa1 awa nemaminitsi gumi nemashanu uye hazvizomboenderera. Ndakamuka mangwanani ano uye yanga ichiri pa15 awa nemaminetsi gumi nemashanu! Arrrgh!
Ndiri kuenda kuedza Carbon Kopa Clone inotevera!
May 3, 2007 pa 2: 35 AM
Izvo zvinonzwika senge pane dambudziko rakaoma-diski pane yako Mac bhuku.
Wakamboedza here kumhanya DiskWarrior? Chirongwa chakanaka kuve nacho kana uine Mac (ini ndinowanzo shamisika kuti sei vasati vatengwa neApple zvakadaro…)
Asi mira - unomhanya here Applejack zvakadaro - izvo zvinogona kuchengetedza zuva, uye ndeye freeware.
Rombo rakanaka - dai iro simba ringave newe.
May 2, 2007 pa 11: 08 PM
Macs zvakaoma kushandisa iwe haugone kufambisa mafaera kubva kune imwe uchienda kune mamwe? Wow. Izvo zvinoyamwa!
May 3, 2007 pa 7: 23 AM
Handifunge kuti dzakaomarara kushandisa zvachose - asi zvirokwazvo hadzishande zvakanaka kana dzichirwara sedzangu! Ndiri kuenda kuchitoro cheApple nhasi kuti ndione zvavanogona kuwana.